Ungazikhetha Kanjani Iziteshi Ezinhle Zamasu Wakho Wokusekela Amakhasimende | Martech Zone
Isikhathi sokufunda: 8 imizuzu
Ngokufika kwezilinganiso zebhizinisi, ukubuyekezwa okuku-inthanethi, kanye nemithombo yezokuxhumana, imizamo yenkampani yakho yokuxhaswa kwamakhasimende manje seyingene nesithunzi somkhiqizo wakho nesipiliyoni samakhasimende akho online. Empeleni, akubalulekile ukuthi imizamo yakho yokumaketha mikhulu kangakanani uma uxhaso lwakho nolwazi lungekho.
Umkhiqizo wenkampani ufana nedumela lomuntu. Uthola idumela ngokuzama ukwenza izinto ezinzima kahle.
Ngabe amakhasimende akho nomkhiqizo wakho bayangqubuzana ngaso sonke isikhathi ngaso sonke isikhathi?
Yize inkampani yakho icwila ngamazinyo eMnyangweni Wezinsizakalo Zamakhasimende.
Ngaphandle kokwanelisa futhi kuvame ukweqa okulindelwe yikhasimende lakho.
Ngaphandle kwazo zonke lezo zinhlelo zamahhala (futhi ezibiza kakhulu) nezinhlelo zokuthembeka uzikhipha njalo manje.
Uma izimpendulo zazo zonke lezi zingu “yebo,” kufanele ubuyele ebhodini lokudweba uphinde uvakashele eyakho isu lamakhasimende. Ukukuqondisa, ake siqonde ukuthi “kungani” ngaphambi kokuthi “kanjani” futhi sibheke ukuthi yini ebangela ukuthi amakhasimende akho ajikele ohlangothini olumnyama. Nazi izimo ezimbili ezinengqondo:
Isimo 1: Wenza Kakhulu Kakhulu
Njengokubukeka okuphikisayo njengoba kungabonakala, kukhona into efana nokwenza "ngokweqile" uma kukhulunywa ngokuhlinzekwa kwamakhasimende. Ukuhlala njalo sibamba zonke izinto 'ngokusebenzayo,' siyaqonda ukuthi akunakwenzeka ukunikeza ukuxhaswa kuzo zonke iziteshi noma sibe; okuyo yonke indawo 'ngomqondo othile. Ukusilela kwemali yabantu kanye nezindleko ezeqile kuvame ukubalulwa njengezizathu eziyinhloko zalokhu. Ukufeza lokho, umqondo ucabanga ukuthi kungcono uma ukhetha iziteshi ezifanele ezinengqondo kumakhasimende akho.
Ngakho-ke, uma udinga, buyela emuva esiteshini esingakusebenzeli. Kepha okubaluleke kakhulu, kwenze ngomusa. Igama elisebenzayo ngomusa. Nalu uhlu olusebenzayo lwezinyathelo ongazenza ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho awaqedi ukuzizwa ethukuthele futhi enganelisekile (ngenxa yezinguquko ezingazelelwe nezingagwemeki ezizofika kubo):
Ngena kufayela lakho le- Ukucabanga kwekhasimende ukunqanda izinselelo / ukukhungatheka abangabhekana nakho. Ngokwamukela umzila onozwela ngokwengeziwe, ungadambisa ubuhlungu babo futhi ubhekane ngokuphumelelayo nokukhathazeka kwabo.
Sebenzisa i- izinguquko ngezigaba esikhundleni sokususa amathuluzi okusekela ngasikhathi sinye. Enye indlela yokwenza lokhu ngokunikela ngokunye ukukhetha kokusekelwa nokukugqamisa epulatifomu ngaphambi kokususa noma yiluphi uhlobo lokuxhaswa kwamakhasimende.
Khetha okuningi izinketho zokudala nokwenziwa kwamakhasimende okwenziwe ngezifiso uma iziteshi sezivaliwe. Imihlahlandlela yezemfundo isebenza kahle ukuphatha amakhasimende ngesandla futhi ibeke zonke izinketho ezitholakalayo zazo.
Hlakulela okuningi isitayela esiqondile nesithembekile sokuxhumana uma kukhulunywa ngokufundisa amakhasimende ngamashaneli osizo atholakalayo. Isibonelo, nakhu okudluliselwa ngumkhiqizo uKinsta kumakhasimende abo:
Umsebenzi wokusekela uvame ukudinga ukucabangisisa, ukugxila nokucwaninga. Ukugcina ukusekelwa ku-inthanethi kuphela kusivumela ukuthi sikusize kangcono ukuxazulula iwebhusayithi yakho ngendlela esheshayo nephumelelayo, njengoba onjiniyela bethu bekwazi ukugxila kuwo wonke amandla abo ekuxazululeni izinkinga zakho zokusekela ngenani elincane kakhulu leziphazamiso nokuphazamiseka okungenzeka. Lokhu, futhi, kusho ukuthi izicelo zakho zokuxhaswa ekugcineni zixazululwa ngokushesha.
Cabanga ukwesekwa kwamakhasimende njengohambo futhi ukhombe amaphuzu wokuthinta abalulekile azisa amakhasimende ngoshintsho olwenziwe ohlelweni lokusekela. Lokhu kufaka izibonelo ezinjengokuqondisa kabusha amakhasi amadala okufika kwisithangami somphakathi lapho amakhasimende angathola khona izinto ezintsha nezikhuthazayo kuzentuthuko eziqhubekayo zomkhiqizo - ezihlobene nokusekelwa noma okunye.
Ukhiye Osemqoka: Isisho esithi, "okungcono kungcono" asihlali sikhetha ngaso sonke isikhathi uma kukhulunywa ngokusebenzisa amathuluzi wokunikeza isipiliyoni senkonzo yamakhasimende e-stellar. Kwesinye isikhathi, izinketho ezimbalwa nezigxile kakhulu zenza umsebenzi kangcono futhi usheshe. Futhi, kunengqondo ukuqondisa amakhasimende akho kulo lonke 'ushintsho' olwenziwa ngendlela yokuxhumana okucacile nokusebenzayo nokunikeza ezinye izindlela zokusekela.
Isimo 2: Awugxili “Kanele” kokuhlangenwe nakho kokusekelwa kwamakhasimende “OKUBI”.
Amakhasimende avame ukuthanda inkampani ngeminikelo yayo eyingqayizivele, amanani entengo yokuncintisana, ukusebenziseka kalula, nemikhiqizo yekhwalithi, phakathi kwezinye izinto. Kuyaqabukela kakhulu ukuthi “umuzwa omuhle wamakhasimende” uqhamuke ohlwini lwezizathu zokuthi kungani bekhetha uphawu A ngaphezu komkhiqizo B.
Kodwa-ke, ngokuthakazelisayo, isevisi embi yamakhasimende imvamisa kungesinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani amakhasimende eyeka ukuzibandakanya nomkhiqizo. Ezinye izibonelo eziza engqondweni:
Leyo migqa emide engapheli ocingweni evela kumhlinzeki wesevisi yamakhasimende.
Leso sikhwama usanda kusilahla usaya ku-honeymoon.
Lelo gumbi lehhotela eligcwele ukungcola eligcine libize ibhomu ekhadini lakho lesikweletu.
Uhlu luyaqhubeka… Ngaphandle kokusho ukuthi zonke lezi zibonelo zakha ulwazi olubi kakhulu lwamakhasimende oludinga ukungenelelwa ngokushesha.
Empeleni, ucwaningo olwenziwe nguMkhandlu Wokuxhumana Namakhasimende luthole imininingwane emibili ethakazelisayo okufanele ibe yingxenye yecebo lamakhasimende enkampani ngayinye: Lithi:
Ukujabulisa amakhasimende akwenzi ukwethembeka; ukunciphisa umzamo wabo — umsebenzi okufanele bawenze ukuze baxazulule inkinga yabo — uyawenza.
Umkhandlu Wokuxhumana Namakhasimende
Lokhu kusho ukuthi ukwengezwa kwenani lomkhiqizo wakho kufanele kuzungeze kudambise ukukhathazeka kwamakhasimende esikhundleni sokunikeza izici ezinhle, ezingasizi kangako.
Ukungeza ekutholeni kokuqala, ithi:
Ukwenza ngamabomu ngalokhu kuqonda kungasiza ukuthuthukisa ukulethwa kwamakhasimende, kunciphise izindleko zesevisi yamakhasimende, futhi kunciphise ukukhwabanisa kwamakhasimende.
Ukhiye Osemqoka: Amakhasimende azimisele ukuziphindiselela ngenxa yezinsizakalo ezimbi kunezinkampani zemiklomelo zesevisi engcono. Uma umkhiqizo wakho ungacabangi ngezinyawo zawo futhi unciphise ilog yangemuva yalezo zikhalazo ezanda njalo zamakhasimende, izowela phansi emgodini wonogwaja - ungaphinde uvuseleleke.
Imibuzo Emqoka Okufanele Uyicabangele Lapho Wamukela Indlela "Yekhasimende Okokuqala"
Uma kukhulunywa ngokuboleka isandla sakho nendlebe ezwelayo kumakhasimende akho, kunemibuzo ebalulekile edinga ukufundwa nokuhlolwa:
Indlela Ejwayelekile Yokubuza:
Angobani amakhasimende akho?
Ziyini izidingo / izidingo zakho?
Ungakwazi yini ukubhala uhlu lwezintandokazi ezahlukahlukene zabantu abahlukahlukene?
Indlela Ekhethekile Yokubuza:
Ngokombono wekhasimende, "kuphuthuma" kangakanani uma kuziwa ekuphenduleni? Ingabe imizuzwana eyishumi, imizuzu emihlanu, ihora noma usuku?
Uhlobo luni lokusebenzisa okufanele ulusebenzise njengesisekelo sohlobo lombuzo / ukukhathazeka. Ngokuyisisekelo, kudinga ukuklanywa phakathi kwezinkinga ezidinga ukwesekwa kwefoni nezinkinga ezingabhekelwa online. Imvamisa, izindaba zezezimali zidinga ukwesekwa kwefoni ukuthola isisombululo esisheshayo nesisebenzayo.
Ithiphu elula: Uma kukhulunywa ngokuqonda ikhasimende lakho, thatha lokhu njengomthetho wesithupha:
Lalela lokho amakhasimende akho akutshela khona - kodwa hhayi eduze kakhulu.
Udidekile? Ake sithathe isibonelo. Lokho esikushoyo ukuthi ngenkathi amakhasimende kungenzeka ukuthi acela ukuxhaswa ngocingo, abakufunayo ngempela impendulo esheshayo. Kuze kube sekugcineni, kunconywa kakhulu ukuthi iqembu lakho lokusekela liqeqeshwe elingabasiza ukuthi basheshe baphendule imibuzo yekhasimende ngokushesha.
Izinzuzo Nezindleko Zamathuluzi Okusiza Amakhasimende Aphezulu: Umhlahlandlela Osheshayo
Akungabazeki ukuthi uma kukhulunywa ngezinsizakalo zamakhasimende, izinkampani ezahlukahlukene zikhetha amasu ahlukile - ngokwesisekelo sezidingo zazo, okulindelwe yikhasimende, ukukhathazeka ngesabelomali, njalonjalo. Futhi, ngenqwaba yezinketho ezitholakalayo namuhla, kungadideka futhi kukhungathekise ukusho okuncane. Ukwenza izinto zibe lula kuwe, sibhale izinzuzo nezingozi eziphezulu zeziteshi ezine eziyinhloko zokusekelwa kwamakhasimende ezisebenza namuhla, okungukuthi:
Ingabe "Ngukucela Okufanele" Okunikezwa Okuhlangenwe nakho Okukhanyayo KweKhasimende?
Buhle bokusebenzisa ukwesekwa kwefoni:
Ingenye yezinhlobo ezidume kakhulu nezincanyelwayo zezinketho zesevisi yamakhasimende phakathi kwemikhiqizo emhlabeni wonke.
Kuyindlela eqondile yokuxhumana engashiyi ndawo yamaphutha noma ukungaqondi.
Ngokushesha nangokunembile ikhuluma ngokukhathazeka nemizwa yekhasimende.
Kuyasebenza ekunakekeleni izingqinamba eziyinkimbinkimbi futhi eziphuthumayo ezingabhekana namakhasimende.
Nebubi lokusebenzisa ukwesekwa kwefoni:
Kungabonakala “kuphelelwe yisikhathi” noma kuphelelwe yisikhathi ikakhulukazi esizukulwaneni esisha njengoba bethanda ukuthumela imiyalezo kunokukhuluma.
Kungaholela ekucindezelekeni okukhulu nasekukhungathekeni uma amakhasimende agcina elinde isikhathi eside. Lokhu kwenzeka kakhulu uma abenzeli bematasa noma uma inkampani ingasebenzi kahle.
Izinkinga zobuchwepheshe ezinjengenethiwekhi engafanele zingavimbela amakhasimende ukuthi acele usizo.
Ingabe “Ukuxoxa” Kungalimaza Kakhulu Kunokulunga?
Izinzuzo zokusebenzisa ukuxhaswa kwengxoxo:
Inikeza ukulungiswa kombuzo osheshayo futhi osebenzayo - kwesinye isikhathi njengoba phezulu njengo-92% phakathi kwamakhasimende!
Kuyindlela eshibhile kunokusekelwa kwefoni futhi isebenza njengesisekelo solwazi olukhulu.
Inika amandla ama-ejenti / ama-bots ukuthi axoxe nabantu abaningi ngasikhathi sinye. Eqinisweni, imininingwane eyenziwe yiCallCentreHelper iphakamisa ukuthi cishe "Ama-ejenti angama-70% ingakwazi ukuphatha izingxoxo ezi-2-3 ngasikhathi sinye, kuyilapho ama-22% wabasekeli abakwazi ukuphatha izingxoxo ezi-4-5 ngasikhathi sinye. ”
Isiza izinkampani ukwenza izinsiza zishintshe futhi zinikeze umuzwa oqondisiwe ngokwengeziwe ngokuhlanganisa izici zesikhathi esizayo ezifana ne-chatbot nokuphequlula ngokubambisana ngokulandelana.
Inikeza ikhono lokulandela umkhondo wengxoxo (imvamisa ngendlela yedeshibhodi) esebenza njengesethenjwa esisebenzisekayo sekusasa lomthengi kanye nommeleli wamakhasimende.
Inika amandla ama-brand njengoba ekwazi ukuthola ukuqonda okubalulekile (okukhishwe kumaseshini wengxoxo bukhoma) njengokuziphatha kokuthenga komsebenzisi, izikhalazo ezedlule, izisusa zomthengi kanye nokulindela, njll futhi akusebenzise ukuletha amasevisi / iminikelo engcono.
Ububi bokusebenzisa ukuxhaswa kwengxoxo:
Ngokusho kukaKayako, izimpendulo ezibhaliwe zinengekile kumakhasimende akho. Abathengi abangama-29% bathi bathola izimpendulo ezibhalwe phansi ezikhungathekisa kakhulu, kanti amabhizinisi angama-38% ayavuma.
Kungaholela ekuxazululeni izinkinga ezingagculisi uma i-chatbot ingakwazi ukubhekana nokukhathazeka kwamakhasimende futhi kufanele iqondise futhi umsebenzisi kumenzeli. Ngokwemvelo, kugcina kuthatha isikhathi esithe xaxa futhi kuholele kukhasimende elingeneme.
Ingakhuphuka ngokushesha isuke ekuthandeni futhi ibe wusizo iye ekucasuleni uma izimemo zengxoxo zisetshenziswa kabi noma zisetshenziswa kaningi.
Uthi bewazi? Idatha eyenziwe yi-MarketingDive ithi abantu abangaphezu kweminyaka engama-55 badlulisela ukwesekwa ngocingo kwamanye amapulatifomu.
Imeyili yiNew Medium of Communication - Noma Ingabe?
Izinzuzo zokusebenzisa ukwesekwa kwe-imeyili:
Ingenye yezindlela zokuxhumana ezisetshenziswa kakhulu. Eqinisweni, idatha iphakamisa ukuthi abantu bayathumela 269 billion ama-imeyili nsuku zonke.
Inika amandla imikhiqizo ukuthumela imibuzo - ubusuku noma imini, izinsuku ezingama-365 ngonyaka.
Inikeza ngokuzithandela, ubufakazi obubhaliwe (ngokungabi nesikhathi esingcono) ukuze kusetshenziswe esikhathini esizayo ukuze wonke umuntu ahlale ekhasini elilodwa.
Iphindeka kabili njengethuba lokuzenzakalela imibuzo efanayo ngokusebenzisa izakhiwo ze-chat bot.
Kuyasiza brand ukuxhumana namakhasimende ngendlela egcizelele ngokwengeziwe futhi engahlelekile. Ungalandelela futhi ezingxoxweni ezedlule kalula.
Ububi bokusebenzisa ukwesekwa kwe-imeyili:
Kungaholela emaphutheni angaphoqiwe. Isibonelo, le imeyili ye-Amazon yathunyelwa kubantu ababengalindele ingane kanti abanye babenezinkinga zokuzala! Njengoba ungacabanga, intukuthelo yomphakathi yayiphezulu kakhulu. Ukuhlola uhlu lwababhalisile be-imeyili oluzenzakalelayo njalo manje-ke-ke kuyisidingo sokugwema ukwenzakala okunjengalezi.
Kuthatha isikhathi esiningi ngokungafani nokusekelwa kwefoni.
Ayinikezi ukulungiswa kombuzo osheshayo njengoba ama-imeyili athatha isikhathi eside ukuphendula. Lokhu kubi kakhulu njengoba iForrester Research ithi “abathengi abangama-41% balindele impendulo nge-imeyili kungakapheli amahora ayisithupha.”
Kudinga amakhono amaningi akhethekile njengokukwazi ukufunda ingqondo yomsebenzisi nokufunda phakathi kwemigqa. Ukuxhumana akuqondile futhi kungadidaniswa. Sekukonke, umongo wokuxhumana ungalahleka kalula phakathi kokushintshaniswa kwama-imeyili amaningi.
Ukuxhaswa Kwemidiya Yezenhlalo:
Ngabe Ukuba Nokubakhona Komphakathi Oku-inthanethi Kuyisibopho Noma Bane?
Izinzuzo zokusebenzisa ukwesekwa kwemidiya yezenhlalo:
Inikeza ngezindlela ezahlukahlukene lapho izinkampani zingabhekana nokukhathazeka komsebenzisi njengokuphawula okuposiwe, izingxoxo ezizimele / eziqondile, nemiyalezo yeqembu. Kuyasiza ukwenza ucwaningo lwemakethe futhi uqonde kangcono umsebenzisi wakho.
Ukuba sesidlangalaleni ngokwemvelo, kusiza abasebenzisi ukuthi bathole izimpendulo zemibuzo abangaba nayo njengoba othile kungenzeka ukuthi ubekade eyithumele phambilini. Amabhrendi angakha isithangami somphakathi esihlanganisa abantu abacabanga njengabo ndawonye futhi sisize ukubhekana nemibuzo / ukukhathazeka kwabo.
Kubiza mahhala futhi kunikeza ithuba elikhulu lokuphazamiseka komthengi.
Kungasebenza njengethuba elihle lemikhiqizo ukuwina ukwethenjwa ngumsebenzisi ngendlela abathengi abathumela okuhlangenwe nakho okuhle. Imikhiqizo ingasebenzisa futhi amahlaya futhi ibe nobuciko ngokwengeziwe ekubhekaneni nokukhathazeka komsebenzisi! ISkyscanner ikhombisa lokhu ngokugqamile kusibonelo esiboniswe ngenhla.
Kubonisa ikhono lenkampani lokushintsha nokuzivumelanisa nezikhathi ezinamandla njengoba ukusebenza ezinkundleni zokuxhumana kuyisidingo namuhla. Inhlanganisela enkulu njengocwaningo olwenziwe yiMarketDive ibikezela ukuthi “Izingane ezineminyaka emithathu ubudala futhi ngaphansi ngokuyinhloko bakhethe imithombo yezokuxhumana njengendlela yabo yokuxhumana abayithandayo yokusebenzela amakhasimende. ”
Futhi inika amandla ukuzibandakanya kwamakhasimende okuhle futhi isiza imikhiqizo ukwakha ubudlelwano obubalulekile nabasebenzisi.
Ububi bokusebenzisa ukuxhaswa kwezokuxhumana nabantu:
Kungangcolisa igama lomkhiqizo uma kuningi okuthunyelwe okungalungile okubonwayo kuzizinda zomphakathi ezinjenge-Facebook, i-Twitter, njll. Ukwethembeka nokuzayo kungasiza ekunciphiseni umonakalo ngezinga eliphezulu kakhulu.
Kubeka engcupheni yokuziphatha okungafuneki (ngokwesibonelo ukuhlukumeza / ukuphawula okululazayo) futhi kungaholela ezingcupheni zokuphepha njengokuvuza kolwazi noma ukugenca.
Kudinga ukuqapha okuqhubekayo nezimpendulo ezisheshayo ukugwema i-flak yamakhasimende.
Ukutshela abakwa-reps ukuthi badlule okulindelwe amakhasimende kufanele kuveze ukudideka, ukuchitha isikhathi nomzamo, kanye nezipho ezibizayo.
Uma kukhulunywa ngokukhetha amathuluzi okuxhumana amaklayenti afanele, ayikho indlela elingana nosayizi owodwa imikhiqizo engayithatha. Izinhlangano zidinga ukufaka amaphuzu amaningi abalulekile njengezinsizakusebenza ezitholakalayo, isabelomali nesikhathi esinqunyelwe, izidingo zamakhasimende kanye nokulindelwe ngumsebenzisi, njll. Ukuqhamuka necebo lokuxhaswa kwamakhasimende eliletha kuwo wonke ama-akhawunti:
Ngokunikezela ngesipiliyoni samakhasimende esingenamthungo, esingenazihibe, nesomuntu uqobo.
Ngokuqinisekisa ukuthi amasu awabizi inkampani - ngokwezimali noma ngenye indlela.
Ngokunikeza inani elifanelekile kubo bonke ababambiqhaza ababandakanyekayo - kusukela kubatshalizimali namakhasimende kuya kubasebenzi benkampani kanye nomphakathi wonkana wonkana.
Uhlome ngalo lonke lolu lwazi, sekuyisikhathi sokuhamba ukhulume futhi wethule isipiliyoni samakhasimende angenangqondo - esijabulisa futhi esifundise amakhasimende ngasikhathi sinye. Ingabe ungaphakathi? Besicabanga kanjalo.
Tags: igama lomkhiqizoukwesekwa nge-imeyiliukuxhaswa kwezokuxhumana nabantu
U-Ashwini uyazifela ngeBusiness, Entrepreneurship, E-commerce, neDigital Marketing. Usebenza naye Zuza njengochwepheshe wokumaketha edijithali. Ungumphefumulo okhululekile nesazi esithandekayo esichitha isikhathi saso sodwa, sithandwa kanye, umculo, kanye nokubuka nokudlala imidlalo. Uwumlutha wolwandle futhi emigwaqeni ungumhambi ofuna injabulo ukuze athole okuhlangenwe nakho okusha njengoba ebheka impilo njengemisebenzi yethu yobuciko.